Umkhiqizi wentengo kamatilasi ophindwe kabili wentengo kamatilasi | Rayson
Ngamandla aqinile we-R & D kanye namandla okukhiqiza, amaRayson manje asephenduke umenzi wobungcweti kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kufaka phakathi intengo yomatilasi entwasahlobo ephindwe kabili yenziwa ngokususelwa ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi oluqinile namazinga aphesheya. Intengo ephindwe kabili yasentwasahlobo sentwasahlobo sentwasahlobo sithembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende anemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi intengo yomatilasi eshisayo entwasahlobo kanye nezinsizakalo eziphelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe, siyakujabulela ukukutshela.Kunokuthamba okuhle. Kuhlolwe ngokuya ngezakhiwo ezilandelayo: Ukucindezelwa, ukugoba, ubulukhuni bendawo, kanye nokungqubuzana komhlaba.